Iyo nyowani dambarefu raBeyoncé naJay-Z, rave kuwanikwa paApple Music mushure mekufamba kuburikidza neTidal | Ndinobva mac
Beyoncé naJay-Z's new album, yava kuwanikwa paApple Music mushure mekufamba kuburikidza neTidal
Nyaya yekusarudzika kwenguva pfupi mumimhanzi inoyerera yave kuita kupfuura zvakajairika, kunyange mamwe makambani ekurekodha asingazvifarire zvachose, sezvatambotaura kare. Beyoncé naJay-Z ndivo vanamwarikadzi, kunze kwevaridzi, veTidal uye, sezvingatarisirwa, roga roga runyorwa rwavanoburitsa. enda kuburikidza nekushambadzira kwavo mimhanzi sevhisi pamberi.
Mugovera wadarika, Beyonzé naJay-Z's new album yakatanga kuratidzwa paTidal, albha inonzi Zvese rudo chete kune vanonyorera kuTidal, ayo Jay-Z ndiye mugovani wayo mukuru. Mazuva maviri mushure mekuita kwayo kwekutanga, dambarefu ravakaburitsa pamwechete rave kuwanikwa pane ese Apple Music, Spotify Premium uye Amazon Music Unlimited.
Hukama huri pakati paBeyoncé naJay-Z mumakore achangopfuura hausati hwave uye hahuna kuita sezvingaitarisirwa nemunhu. Dhisiki remonedhi naBeyoncé haisati yambowanikwa paApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi kunyange iri kuwanikwa kutengeswa kuburikidza neTunes ye 17,99 euros. Kunyangwe Jay-Z achibvisa ese maalbham kubva kuApple Music muna Kubvumbi 2017, mwedzi mishoma gare gare vakave vanowanikwa kune vanyoreri kuApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi zvakare.
Aya mazuva maviri eakasarudzika kuTidal ari kunyanya kurova achienzaniswa neay Jay-z yazvino solo album 4:44, iyo albhu iyo vakapedza vhiki chete paTidal isati yaita zviri pamutemo kusvika kwayo paApple Music zhizha rapfuura.
Mavhiki mashoma apfuura, akasiyana masosi akavimbisa kuti kambani Ndakanga ndine matambudziko emari, dambudziko rinogona kukonzeresa kuvharwa kwenzvimbo yekushambadzira mimhanzi mumwedzi mitanhatu, chimwe chinhu icho parizvino chisina kuitika sezvatinogona kuona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Beyoncé naJay-Z's new album, yava kuwanikwa paApple Music mushure mekufamba kuburikidza neTidal
Iyo yechitatu beta ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.6 ikozvino inowanika kune vanogadzira